मलाई बचाइदिनुहोस् ! डाक्टर बनेर देशको सेवागर्न चाहन्छु Kasthamandap Daily
काठमाडौं । बोनम्यारोमा संक्रमण भएर उपचाररत पाँचवर्षीया मियुङ्गपुन मगरलाई सहयोगको अपिलगरिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मगरको परिवार र आफन्तले सहयोगको अपिल गरेकाहुन् । ‘मियुङ्गपुन मगर बचाऔं अभियान’ले सहयोगीमनहरुकालागिग्लोबल आई.एम.ई.बैकको खाता नं. ०७०७०१०००८४१७मा रकमजम्मागरिदिनआग्रह गरेको छ ।
भूपेन्द्र बुढा, उषापुन र सबिन पुलामी मगरको नाममा रहेको संयुक्तखातापारदर्शी गरिएको जानकारी गराइयो । सहयोगकालागिमियङ्गपुनकीआमाउषापुनको सम्पर्क नम्बर ९८६६३०८४४८ मा सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी दिइयो ।
रोल्पाजिल्लाथवाङ गाउँपालिका वडा नं. ५जीवनपुनर उषापुनमगरकीपाँचवर्षीया छोरी मियुङ्गपुन मगर लामो समय देखि बोनम्यारो रागबाट पिडित छिन् । कार्यक्रममाउपस्थितभएकीमियुङ्गपुन मगरले आफू बाँच्नचाहेको बताइन् । पाँचवर्षीया बालिकाले भनिन्,‘मलाई बचाइदिनुहोस्,म बाँचेर डाक्टर बनी देश र समाजको लागिकाम गर्छु ।’
उनकीआमाउषापुन मगरेले रुँदै आफ्नी छोरी जन्मेको तीनमहिनादेखि नै रोगीभएको र उपचार गर्दा तीनचार वर्ष अगाडिबोनम्यारो रोगको सिकार भएको पत्तालागेको बताइन । छोरीको तीनमहिना अघिदेखिअल्का अस्पतालमा उपचार गराएको र हालसिभिल हस्पिटल बानेश्वरमाउपचार गराईरहेको उनले बताइन् । उपचारमाआफ्नो सबै सम्पत्ति सकिएको र सम्पत्तिका रुपमा छोरी मात्रबाँकी रहेको हुँदा छोरीको उपचारकालागि सहयोग गर्न आग्रहगरिन् ।
मगर संघका अध्यक्ष समेत रहेकाआदिवासीजनजाति संघका कार्यवाहकअध्यक्षनवीन रोक्का मगरले मियुङ्गपुन मगरको जीवन रक्षाकालागि सबैलाई आआफ्नो ठाउँबाट सहयोगको आग्रह गरे । बचाउअभियानमायुवाको तर्फबाट भएको बताए । रोग लागेर उपचारमा समस्या रहेकाहरुको सहयोगकालागिसरकार नै लाग्नुपर्ने बताए । मियुङ्गपुन मगर बचाउअभियानमा सातजनाको टोलीबनाएर अभियानचलाएको र उपचारकालागिपाँचलाखलाग्ने हुँदा सबैले सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरे ।